देशलाई उन्नतिको बाटोमा हिडांउनुको बिकल्प छैन - Everest Dainik - News from Nepal
देशलाई उन्नतिको बाटोमा हिडांउनुको बिकल्प छैन
युवराज संग्रौला ।
सरकार के गर्छ, उहीँ जानोस तर अलिकति पनि श्रम र शिपहुने प्रतेक नेपालीले उत्पादनको काममा लाग्नु पर्छ। पहिला खाने कुरा उत्पादन गर्न लागौं। बिदेशबाट आएका खाद्यान्न र तर्कारी बहिस्कार गरौं। नेपाली किसानका उत्पादनलाई प्राथमिकता दिंउ।
सरकारले गर्ने कामहरु छ्न पनि धेरै छन्।सरकार लाई यी काम गर्न बाध्य गरौं।
१.२०३ बर्ष देखि बेलायती उपनिबेश र साम्राज्यबादले श्रम, सीप र इमान्दारीता शोषण गरिएका जनजाती समुदायका युवाहरुलाइ अब डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, नर्स र कृषिबिज्ञ बनाउनु अवास्यक छ। १० बर्ष सम्म ७५ प्रतिसत भर्ना तेस समुदायलाई दिई, पुर्वमा इलाम, पस्चिममा स्यांजा र सुदुर पश्चिम र मध्यपश्चिमान्चल मा रोल्पा मुकाम गरि अवासिय बिस्वबिद्ध्यलय सन्चालन गरोस। यश सुमुदायबाट पांचहजार युवाहरूलाई डाक्टर, पाँच हजार इन्जिनियर र पाँच ह्जार कृषीबिद बनाउन सके, गोर्खा भर्ती आफै समाप्त हुन्छ। यी बिश्वबिद्धालयको नाम किराँत, तमु र मगरांत राखियोस। अब देशले यी सभ्यताको जगेर्ना गरेन भने पस्चिमी धर्मले यी सबैलाइ खाइदिन्छ।
२. टिकापुरमा थरुवान बिश्वबिद्धालय बनाइ २००० थारु युवालाई डाक्टर, २००० इन्जिनियर र २००० कृषिबिद बनाउन सेके थारुहरुको समृद्धि आफै बन्छ।उनीहरुको प्राचीन संस्कृति र यो आधुनिक शिक्षाको पंहुचलाई जोड्नसके यो समुदाय रास्ट्रको संरक्षण गर्ने एउटा महत्वपूर्ण समुदाय हुनेछ।
३. देशको बिकास गर्ने हो भने पहिला देशलाई रोगी समाजबाट उन्मुक्त गर्नु पर्छ। नेपालीहरु अनेक किसिमका रोगि छ्न। तेसैले स्वस्थ नेपाली समाज बनाउन, खानपिन पौस्टिक हुनु पर्छ, नेपालीहरुलाई अधिक रुपमा खेलकुदमा सरिक गराउनु पर्छ, र नागरीक शिक्षामा जोदिनु पर्छ। माथिका सबै बिश्वबिद्धालयलाई खेल्कुद केन्द्रको रुपमा समेत बिकास गर्नु पर्छ। यी तिनैवटा बिश्वबिद्धालयमा २० प्रतिशत दलित र ५ प्रतिशत गरिब बाहुन क्षेत्रीलाई अवसर दिनपर्छ।
४.नेपालमा तिनवटा चिकित्सा बिश्वबिद्धालय तत्काल स्थापना गर्नु पर्छ। दांङ्गमा एलोपेथी, आयुर्वेद र चिनियाँ परमपरागत औषधिलाई मिलाइ एउटा बिश्वबिद्धालय स्थापना गर्नु पर्छ। हेटौंडामा रोग अनुसन्धान र निवारण गाभी जनस्वास्थ्य बिश्वबिद्धालय बनाउनु पर्छ। लहानमा आँखा र सबैकिसिमका अपांगता सबन्धी विश्वाबिधालय निर्माण गर्नु पर्छ। यी बिश्वबिद्धालयमा आधुनिक अस्पतालहरुको ब्यबस्था गरि उत्तर भारतका बिरामीलाई समेत आकर्षण गर्न सके यी अस्पतालले कमाएको आमदानीले नै बिश्वबिद्धालय चल्ने छन।
५.स्टाफ कलेज, मिलीलीटरि एकेडेमी, पुलिस एकेडेमी, जुडिसियल एकेडमी, र काठमाडौ स्कुल अफ ललाइ गाभेर रास्ट्रीय सामाजिक विश्वबिधालय का रुपमा स्तापितगरि रास्ट्रको बौद्धिक ढुकुटी बनाउनु पर्छ। काठमाडौं स्कुल अफ ल संस्थापकहरुको सम्पत्ति होइन भलै उनीहरुको परिश्रमले जोडेको हो। यो सम्पत्ति सरकारलाई सुम्पिने गरि यस्को निर्माण गरिएको हो।
६.पालुङ्ग उपत्याकालाइ औषधि निर्माण र चिकित्सा अनुसन्धान शहरका रुपमा बिकास गरि जटिल रोग उपचार केन्द्रको रुपमा बिकास गर्नु पर्छ। यश शहरमा तेस्ता अस्पतालहरु बनाउन सकिन्छ जस्को प्रयोग भारतका धनाड्यले गरून्। यहाँ चीन र भारतका लगानीकर्ताले अस्पताल र फार्मेसीमा लगानी गर्ने बाताबरण बनाउं।
अन्य बिश्वबिद्धालयहरुलाई उत्पादनमुखी र ब्यबासायीक बिश्वबिद्धालयमा बिकास गर्नु पर्छ। सबै मेडिकल कलेज र अस्पतालहरुको अनुगमन र निगरानीका लागि शक्तिसाली अम्बुडस्मेनको स्थापना गर्नु पर्छ। अहिले जबर्जस्ति चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाइ प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष बनाउने ब्यबस्थाले चिकित्सा शिक्षालाई राजनितिक माफियाको हातमा पुर्याउने संभाबना छ।
आफैले नियुक्त गरेको उपकुलपतिको प्रसासन अन्तर्गत रहेको मेडिकल कलेजको भर्ना चै प्रधानमन्त्रीको आयोगले गर्ने कस्तो माग हो अनि कस्तो समाधान हो?
ट्याग्स: युवराज संग्रौला